> Resource > Transfer > Sida loo saar Audio ka MOV Files (Quicktime) ee Windows / Mac
Marka sixiddiisa file video MOV QuickTime ah, mararka qaar waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in meesha laga saaro raad guraa audio la si aad ku dari kartaa track ka duwan audio. In kasta oo kala duwan oo ka mid ah barnaamijyada video tafatirka kaa caawin kara inaad gaarto tan, waxaan qabaa Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waa qiimo isku dayaya. Barnaamijkan waxa cross-madal si ay u caawin karaan in aad ka files MOV asalka saarto audio si buuxda u sahlan in labada Windows iyo Mac.
Hoos waxaa ku tutorial faahfaahsan oo ku saabsan sida audio inay ka soo saarto ka files QuickTime MOV in Windows (Widnows XP / Vista / 7/8 ka mid ah). Haddii aad socda Mac ah, waxaad dooran kartaa Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) si la mid ah loo gaaro. Ka hor inta aanay is bilaabay, fadlan kala soo bixi iyo rakibi version saxda ah ee nidaamka hawl gal.
1 dejinteeda il video files
Ka dib markii download oo bilaabaya tan Faydi audio, kala doorto 16: 9 iyo 4: 3 heerka raashinka. Markaas riix "Import" badhanka si ay u dar files il video barnaamijka. Waxa kale oo aad si toos ah u soo jiidi kartaa jeedi MOV video files si album isticmaala.
2 ka files QuickTime MOV saar audio
Ka dib markii ay soo degida ee isha video files, u dhig waqtiga video ah. Double guji file bartilmaameedka si ay u muujiyo. Markaas xaq guji dooro "Audio fuji" doorasho. Barnaamijka waxaa si toos ah u kala sooci doonaa track jira audio ka faylka video asalka ah. Waxaad ka heli doontaa track ka soo soocay audio muuqan doona Timeline Audio ah. Si aad u soo saarto, xaq guji wadada audio iyo dooran "Delete".
Talo: Tani tafatirka qalab video sidoo kale aad u saamaxaaya in ay si fudud ku dari aad track dhawaaq u gaar ah. Si tan loo sameeyo, kaliya dajiyaan file maqal ah sidii tallaabo 1 iyo markaas jiidi oo waxay hoos u waqtiga audio. Haddii baahida audio sixiddiisa, double waxa guji si ay ula qabsadaan mugga, xawaaraha, garoonka ama dari ka baxeysa gudaha / dibedda saamaynta uu furmo suuqa pop up ah.
3 dhoofinta ama badbaadiyo files cusub
Riix ah "Play" button uu furmo suuqa Falanqeynta midig si uu u arko natiijada. Haddii aad ku qanacsan tahay, ku dhacay "Abuur" oo aad u furmo suuqa dhoofinta tegi doonaa. Sida aad ka arki, barnaamijkan waxay bixisaa wax soo saarka afar siyaabood. In ka "Qaabka" tab, waxaad badbaadin kartaa shaqada cusub ee dhammaan qaabab loo jecel yahay sida AVI, MP4, MOV, FLV iyo wax ka badan. Waxa kale oo aad loogu badalo kartaa video in YouTube qaab socon wax qaybsi online ee "YouTube" tab iyo kolkiiba geliyaan. Ama gubi DVD disk ah daqiiqo si ay u soo daawadaan ku saabsan filimada guriga.
Video Tutorial: Sida loo MOV ka saar Audio
Sida loo MKV ka saar Audio